Ikhaya » izithuba » Ukhuseleko loKhenketho noNgxamiseko » I-Asia Coronavirus I-COVID-19 Uhlaziyo: Izithintelo zokuhamba, imeko yangoku
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zaseCambodia zokuhamba • Iindaba zeHong Kong zokuHamba • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zaseIndonesia zokuhamba • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Iindaba zaseJapan zokuhamba • Iindaba zokuhamba eLaos • Iindaba zokuhamba eMalaysia • Iindaba zokuhamba eMyanmar • omnye • Safety • Iindaba zaseSingapore zokuhamba • Iindaba zokuhamba eThailand • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zokuhamba eVietnam
I-Asia Coronavirus I-COVID-19 Uhlaziyo: Izithintelo zokuhamba, imeko yangoku
Uhlaziyo lwaseAsia kwiCoronavirus COVID-19: Uthintelo lohambo kunye nemeko yangoku
Kwasekuqaleni kukaJanuwari 2020, iqela leenyumoniya elingaziwa ngesizathu esingaziwayo lafunyanwa kwisiXeko saseWuhan, eHubei, China. Isiphumo I-COVID-19 coronavirus kukhokelele ngaphezulu kwama-95,000 amatyala aqinisekisiweyo kwihlabathi liphela. Kwezi meko ziqinisekisiweyo, inani lilonke "elibuyisiweyo" liphantse lama-54,000. Ukusukela phakathi ku-Februwari, inqanaba lokuchacha lenyuke ngokuqatha (ngaphezulu kwe-50%), ngelixa iimeko ezisandul 'ukuxelwa zichazwe ngokucacileyo kwinani. Uhlaziyo lwe-Asia Coronavirus COVID-19 lukhutshwe yi-Destination Asia (DA).
Kwiindawo ezili-11 ezibekwe esweni yi-DA, okwangoku akukho matyala aqinisekisiweyo e-COVID-19 eMyanmar, eLaos, okanye kwisiqithi saseBali. I-Thailand, iVietnam, iCambodia neMalaysia zirekhodile amatyala angaphantsi kwe-110 aqinisekisiweyo ngokudibeneyo- kubo, abantu abangama-70 baphinde bachacha ngokupheleleyo. Amaziko aseMelika oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC) ngoFebruwari 27, asusa iVietnam kuluhlu lweendawo ezisengozini yosasazo loluntu lwe-COVID-19 ecaphula amanyathelo abanzi eVietnam ngokuchasene nobhubhane.
I-Singapore ne-Hong Kong zirekhodile ngaphezulu nje kwe-100 yamatyala nganye, kwaye i-Japan isondele kuma-330. Iingcebiso kwi-Asia Coronavirus I-COVID-19 ibonisa ukuba ithathele ingqalelo konke ukuhamba okungabalulekanga ukuya e-China kude kube ngoMeyi. Kuzo zonke ezinye iindawo, iDA ilawula ukubhukisha njengesiqhelo. Ubomi kwezi ndawo ziyaqhubeka njengesiqhelo, kwaye ngaphandle kwe China, ukuhamba ujikeleza lo mmandla kuhlala kulula.
Ngaphandle kwe China, zonke izicwangciso zokuhamba zingaqhubeka njengesiqhelo. Akukho zithintelo zokuhamba zikhutshwe yi-WHO okanye oorhulumente belizwe phakathi kwezinye iindawo ekuya kuzo kwipotfoliyo yethu. Endaweni yokurhoxisa naluphi na uhambo olucwangcisiweyo, i-DA icebisa ukucwangciswa kwakhona.
Ukuphendula imibuzo emalunga ne-COVID-19
Ngolwazi lwamva nje kunye neengcebiso zokhuselo, i-WHO inikezela ngeevidiyo ezinolwazi kunye nezaziso ezinokuprintwa Apha.
I-WHO ikwabonelela ngengxelo yemeko yemihla ngemihla ngamanani athile kumatyala aqinisekisiweyo kunye nokuhanjiswa kwe-COVID-19. Okona kutshanje (nge-4 kaMatshi) kunokujongwa Apha.
Uhlaziyo kwizithintelo zokuhamba ngokubanzi
Uhlaziyo lwe-Asia Coronavirus COVID-19 kwizithintelo zangoku zokuhamba ezinxulumene namazwe kwinethiwekhi ye-DA yenziwe ukuba uninzi lubeke umda kuhambo oluvela eTshayina.
Bonke abahambi ngaphandle kobuzwe obuvela kwilizwekazi lase China abangena eHong Kong bayacelwa ukuba bangene kwisisele esinyanzelekileyo kangangeentsuku ezili-14. Oku kuyasebenza nakwabahambi abatyelele i-Emilia-Romagna, iLombardy okanye imimandla yaseVeneto e-Italiya okanye e-Iran kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo. Abahambi abatyelele uMzantsi Korea zingaphelanga iintsuku ezili-14 zokufika eHong Kong abayi kuvunyelwa ukuba bangene. IGosa eliyiNtloko lesiGqeba sokuLawula libhengeze ukunqunyanyiswa kweenkonzo zokufudukela kwelinye ilizwe eKai Tak Cruise Terminal nakwi-Ocean Terminal, yiyo loo nto kungekho nqanawa zokuhamba ngenqanawa eziya kwamkelwa kude kufike esinye isaziso. Okwangoku, konke ukuwela umda kuvaliwe, ngaphandle kwendawo yokujonga edibeneyo yaseShenzhen Bay, iHong Kong-Zhuhai-Macau Bridge kunye nesikhululo seenqwelomoya samanye amazwe. Okwangoku, iHong Kong Disneyland, i-Ocean Park, i-Ngong Ping 360 yeemoto zeCable, kunye neJumbo yokudlela edadayo ivaliwe kude kube sisinye isaziso.
QAPHELA: Umbhoxo weHlabathi ubhengeze ukumiselwa kwakhona kweCathay Pacific / HSBC Hong Kong Sevens. Itonamenti, eyaqala nge-3-5 Epreli, ngoku izakudlalelwa eHong Kong Stadium ukusuka nge-16-18 kweyeDwarha, 2020.
IKhabinethi yaseburhulumenteni yaseSabah kunye neSarawak iziphelisile zonke iinqwelomoya ezisuka e-China. Ukuvalwa akuzange kwenziwe ngumhlaba waseMalaysia. Isizwe saseSarawak sikwabhengeze ukuba nabani na ongena eSarawak oye eSingapore kufuneka ayokuhlaliswa yedwa kwiintsuku ezili-14. Bonke abantu bamanye amazwe abatyelele iSixeko saseDaegu okanye iCheongdo County kwiPhondo laseMntla Gyeonsang kwiRiphabhlikhi yaseKorea, kwiintsuku ezili-14 zokufika eMalaysia (kubandakanya neSarawak) abayi kuvunyelwa ukuba bangene. Ulawulo lweKLCC lufuna ukuba bonke abatyeleli kubandakanya abantwana kunye neentsana bagcwalise ifom yeSibhengezo seMpilo ngaphambi kokundwendwela iSkybridge eKuala Lumpur (ukuqala nge-29 kaFebruwari) kude kube sisaziso.
Abemi bamanye amazwe abatyelele iHubei kunye / okanye amaPhondo aseZhejiang e-China; okanye iDaegu City okanye iCheongdo County kwiPhondo laseMntla Gyeonsang kwiRiphabhlikhi yaseKorea, kwiintsuku ezili-14 zokufika eJapan, ayizukuvunyelwa ukungena. Uhlaziyo lwamva nje lweendawo ezivaliweyo eJapan, nceda unxibelelane nomcebisi wakho waseAsia Japan.
Urhulumente wase-Indonesia ubhengeze ukuthintelwa kweenqwelomoya ukuya nokubuya kwilizwe lase China ukusukela ngomhla we-5 kweyoMdumba ukuya phambili kwaye akazukuvumela iindwendwe ezihleli e-China kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo ukuba zingene okanye zidlule. Umgaqo-nkqubo we-visa yasimahla yabemi base China umisiwe okwexeshana.
Igunya laseVietnam lokundiza ngenqwelomoya limise zonke iinqwelomoya phakathi kwelizwe lase China neVietnam. Abahambi beenqwelomoya abavela kumazwe aneemeko ezixeliweyo ze-COVID-19 kuya kufuneka bangenise isibhengezo sempilo xa bengena eVietnam. Amasango aliqela emida phakathi kweVietnam neTshayina kwiphondo elisemantla laseLang Son ahlala evaliwe. Iqela leenqwelo moya lizimise okwethutyana iinqwelomoya phakathi kweSouth Korea neVietnam. Bonke abantu bamanye amazwe abatyelele iSixeko saseDaegu okanye iCheongdo County kwiPhondo laseMntla Gyeonsang kwiRiphabhlikhi yaseKorea kwiintsuku ezili-14 bayakwalelwa ukungena.
Abemi bamanye amazwe abatyelele i-China, i-Iran, i-Itali esemantla okanye uMzantsi Korea, kwiintsuku ezili-14 zokufika eSingapore abayi kuvunyelwa ukuba bangene okanye badlule.
I-Lao Airlines imise okwethutyana iindlela ezininzi eziya e-China. Urhulumente waseLao uyekile ukukhupha ii-visa zabakhenkethi kwiindawo ekuhlolwa kuzo ezikumda we China.
Isiteyitimenti esikhutshwe liSebe lezeMpilo eThailand nge-3 Matshi sabangela ukudideka. Isiteyitimenti sikhankanye iJamani, i-France, i-Itali, i-Iran, i-China, i-Taiwan, i-Macau, i-Hong Kong, i-Singapore, i-Japan kunye ne-South Korea zahlelwa njengomngcipheko omkhulu, kwaye abahambi abavela kule mimandla bazakubekwa bodwa. Okwangoku, oku akukanyanzeliswa. Ukufumana ezona ngxelo zakutshanje zobume bokuhamba ezivela eThailand, nceda ujonge kwiGosa lezoKhenketho kwiwebhusayithi yaseThailand.
Okwangoku, akukho zithintelo zokuhamba phakathi kwala mazwe ne China.
Ukufumana iividiyo ezingaphezulu kunye neengcebiso malunga neendlela ezisisiseko zokhuselo ngokuchasene ne-COVID-19, ndwendwela Website yeWHO.